Mpanjifa maro no miantso anay amin'ny alàlan'ny tranonkalantsika hanontany momba ny tsiambaratelon'ny fiovana miovaova sy mahia ary ny famolavolana ny tsipika famokarana sakafo mofomamy puff, ka anio dia hanazava ny tsiambaratelon'ny fanovana malefaka sy mahia sy ny famolavolana ny sakafo pastry puff ny tonian-dahatsoratr'i Chenpin. mpamokatra ...
Ny fampirantiana fandrahoana mofo iraisam-pirenena faha-19 2016 tany Sina
Ny fampirantiana fandrahoana mofo iraisam-pirenena faha-19 tany Sina ……
Tsipika famokarana mofo Ciabatta / Baguette mandeha ho azy
Mpanjifa maro no mampiasa ny tranonkalantsika hanontany momba ireo fitaovana ampiasaina amin'ny tsipika famokarana Baguette frantsay, ka anio dia hanazava ireo fitaovana ampiasaina amin'ny tsipika famokarana Baguette frantsay ny tonian-dahatsoratr'i Chenpin. 1. Ny safidin'ny lafarinina: lafarinina 70% ambony + lafarinina ambany 30%, ny tanjaka gluten mahazatra ...
Mpanjifa maro no mampiasa ny tranonkalantsika hanontany momba ny fenitra fanamarihana 5S sy ny fitantanana marika amin'ny tsipika famokarana mofo Baguette frantsay. Androany, ny tonian-dahatsoratr'i Shanghai Chenpin dia hanazava ny fenitra fanamarihana 5S sy ny fitantanana marika amin'ny tsipika famokarana mofo Baguette frantsay. Fandraisana 1 ...
Masinina famokarana Churros
Mpanjifa maro no miantso anay amin'ny alàlan'ny tranonkalantsika hanontany momba ny famintinana ny milina famokarana mofomamy puff, ka anio ny mpampanonta an'i Chenpin dia hanazava ny famintinana ny milina famokarana pastry puff pastry. Tanjona: handaminana ireo olana hita ao anaty ...
Momba ny famokarana mizana amin'ny tsipika Tortilla mandeha ho azy
Mpanjifa maro no mampiasa ny tranonkalantsika hiantsoana hanontany momba ny fifandanjan'ny tsipika famokarana tortilla, ka anio dia hanazava ny fifandanjan'ny tsipika famokarana tortilla ny tonian-dahatsoratr'i Chenpin. Ny antony mahatonga ny tsipika fivoriambe manana tanjaka matanjaka satria mahatsapa ny fizarazaran'ny asa. Ao amin'ny ...
2016 ny fampirantiana fanabeazana fanaingoana iraisam-pirenena fahasivy ambin'ny folo Sina
Fampiroboroboana fanabeazana hanina iraika ambin'ny folo taona 2016 an'i China ……
Miresaka momba ny elanelana misy eo amin'ny indostrian'ny milina sakafo any Shina sy izao tontolo izao
Famakafakana ny fampiroboroboana ny indostrian'ny milina sakafo any amin'ny fireneko tato anatin'ny taona vitsivitsy Ny fananganana indostrian'ny milina sakafo any amin'ny fireneko dia tsy dia ela, ny fototra dia somary malemy, ny teknolojia sy ny tanjaky ny fikarohana siantifika dia tsy ampy, ary ny fivoarany dia somary ...
Maninona ny orinasanay no tokony hanatsara ny fifaninanana vokatra
Nahoana isika no tokony hanome lanja ny fanavaozana ny vokatra eo amin'ny fiaraha-monina ankehitriny? Olana tokony eritreretin'ny orinasa maro izany. Amin'izao fotoana izao, orinasa marobe miompana amin'ny fitomboana eto an-toerana no mijery ny fanavaozana ny vokatra. Ny endrika, ny fiasa ary ny fivarotana ny vokatra dia mihamaro hatrany ...
Mpanamboatra milina pizza mandeha ho azy tanteraka
Masinina pizza mandeha ho azy-Chenpin Food Machinary Co., Ltd. Ny vokatra rehetra dia hosedraina alohan'ny handaozana ny orinasa mba hahazoana antoka ny fahombiazana azo antoka. Ny fiainana serivisy mahazatra dia mety hahatratra 10 taona. Ny masinina dia misy fanavaozana ara-teknolojia rehetra. Ny fanavaozana ny milina dia azo atao mandeha ho azy tanteraka sy mora ...
Mpanamboatra tsipika famokarana tsaramaso mena / paoma Apple
Ny fizotry ny fikorianan'ny vokatra Red Bean / Apple Pie: ny mixer - ny fangaro amin'ny koba - ny fermentation - ny CPE-3100 - ny fandefasana koba - ny vovoka mamorona vovoka ambony sy ny farany ambany - mihodina sy manify - vovoka ambony sy ambany - vovoka vita amin'ny koba. shee ...
Tsipika famokarana Lacha Paratha mandeha ho azy, Dough Laminator Machine, Round Crepe Production Line, Dough Laminator Line, Dough Laminator Production Line, Automatic Dough Laminator Machine,